Vatariri With A Disability In Europe Made Easy | Save A Train
musha > Travel Europe > Vatariri With A Disability In Europe Made Easy
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi(Last Updated On: 05/06/2020)
Nei tichifanira kufamba nechitima? Dzidzisai pakufamba ari kutoita, hunoshanda uye inopa pasocial chinoitwa kuti dzimwe chokufambisa nzira havangagoni kunowirirana. zvisinei, vaifamba aine urema zvinotyisa kune vamwe. Izvi hazvirevi haugoni kuzonakidzwa mafaro, Zvisinei. Nyaya iyi inopa dzimwe nzvimbo dzinokosha kuti unofanira funga kana kuronga yenyu chitima rwendo saka vaifamba aine vakaremara Europe iri shoma anoshungurudza.
Kunyange zvazvo pane Zvechokwadi mamwe matambudziko Accessibility, inokosha chokwadi ndechokuti tsvakurudzo zvaunoita, ari nyore uye kunonakidza rwendo wako achava! Semuyenzaniso; Maiziva kuti matongo Herculaneum vari anenge kufanana kuti rePompeii, asi tiri pawiricheya-ushamwari? Uye kuti rwendo vanhu vakaremara havafaniri kutora “mbongoro nzira” kukwira mawere pavaishanyira chitsuwa Santorini Greek? zororo Your haafaniri kuva hondo - kuita homuweki yako uye rwendo wako unogona kuzadzwa zvakakwana pindika hotera pokugara, svikika migwagwa pakati pindika mushanyi zvinokwezva, uye anoshamisa svikika famba zvakaitika.
Izvo Train kuita Save-A-Train kana uri Kuenda akaremara?
Kana uine akawanda mikana iripo iwe (dzimwe nyika vane mumwe chete njanji hurongwa), edza kusarudza mutakuri kuti anopa zvikuru mabasa yakadekara Rokufambira wako akaremara zvinodiwa. zvinoti; Yevanogara rubatsiro uye pindika akarara motokari. Washrooms vanofanirawo kunge hombe yaikwana iwe pawiricheya pamwe chete perekedza kana mushandi. sezvo nguva dzose, bvunza mibvunzo vakawanda unogona pachine kuti ichengetedzwe isingatarisirwi!
Amenities uye Services
Special Rokufambira akaremara basa ingasiyana munzvimbo imwe, zvichienderana vakawanda chokuratidza; motokari uri kunyanya chitima, zvivako panguva dzakasiyana-siyana nhepfenyuro pamwe nzira yako uye kunyange zvenyu keriya maitiro pamusoro Accessibility.
Ongorora tikiti renyu uye urongwa nokungwarira kamwe iwe kuchigamuchira. Onai kuti imi muri achinyatsoita policies ayo uye urongwa kuitira kuti urege kushamiswa kwenyu stopovers siyana (kunyanya kana parwendo mhiri kwemakungwa).
Ramps uye Weight Limits
Kuwana pamusoro uye chitima iri pachena chinokosha rwendo. nechokwadi chenyu chekubva kusvika dzemapurisa takashongedzerwa dzakakwirira-pamwero platforms kana pawiricheya anosimudza. Izvi zvichaita kuti zvive nyore zvikuru kuti nokudzimwa chitima wako apo Rokufambira aine urema.
Milan kuna Pompei Zvitima
Florence kuna Pompei Zvitima
Vazhinji vatakuri vachaita zvavanokwanisa kutakura vanhu vaifamba akaremara uye zvinogona zvimwe mukwende Ivo kungada (e.g. hwiricheya, okisijeni matangi, etc.). Kana uchiziva zvauri mimwe mukwende zvinodiwa, regai keriya yenyu aizviziva.
Rambira zvikuru kuwana zvikamu veguta. Uyu ndiwo mumwe kunorwadza zvikamu nokuronga kwenyu chitima rwendo apo Rokufambira aine urema. Unogona kuwana hotera huru pindika, asi chii chauchawana paunofamba / vagokungurusa panze? Pane zvikomo uye masitepisi kwose kwose? Munoda kumonera pamusoro cobblestones? Pane mumaresitorendi pindika pedyo? Zvinokosha kuti tsvakurudza hotera nharaunda. Unogona kushandisa Google Maps Street View kuti ndiwane pasi panyika, ipapo paemail hotera nemibvunzo yenyu.
With ose arun kunze nenzira, rangarira kutora nguva kuti kufaranuka uye kunakidzwa ushingi. Wana nguva kusangana wokwako vatakurwi, kutarisa nepahwindo, kana kungoti kurasika kwechinguva sezvo iwe wokufamba nzira saka vazhinji vakaoneka pamberi.
Unogona bhuku nezvitima dzenyu matikiti pakati Uchitsanya nezvitima mu Europe pamusoro Save-A-Rovedzai kusvika ose kuenda wechi pamusoro mu 3 maminitsi, panguva yakachipa pashiri chitima matikiti prices uye kutorerwa obnoxious Réservation yechikoro!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo?, zvino tinya pano: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/traveling-disability-europe/- (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#urema #hwiricheya Train Travel chitima rwendo traveltips